Man City oo dirqi kaga badisay Bristol City+SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Man City oo dirqi kaga badisay Bristol City+SAWIRRO
Sida xaqiiqda ah kulankii Semifinalka koobka Carabao Cup ee ay Xalay cayaartay Manchester City maaheyn mid ay si fudud Guusha ku gaareen ee waxaa ladhihi karaa wuxuu ahaa kii ugu dhibka badnaa ee ay dheesho xiligaan.
Naadiga heerka ee labaad ee Bristol City,waxa ay Cayaar mucjiso ah la dheeleen Naadigii lacelin waayey ee Manchester City Guusha laga Gaarana lama dhihi karo waxay ahayd mid sahlan looga qaatay waxaana looga badiyey 2-1 iyaga ayaan lahoreeyey Goolka.
Goolka laga dhaliyey Manchester City waxa uu ahaa Rigoore ay laga helay biloowgii qaybta labaad ee Cayaarta oo markii hore lagu kala nastay bareejo 0-0 ah waxaase Goolka bareejada ay City heshay daqiiqadii 55 aad markii kubad qurux badan dhaliyey Kevin De Bruyne.
Intaa kadib Cayaartoyda Bristol City waxa ay ku Guuleysteen in u babac dhigaan Manchester City oo aad moodey quraanyo geed laga soo jafay waxayna Guulka Guusha heleen City daqiiqadii u danbeysey waqtigii dheeriga ahaa ee Cayaarta lagu daray waxaana u dhaliyey Weeraryahanka badalka ku soo galay ee Sergio Aguero.
Cayaartaan waxay ahayd Lugta koowaad Semifinalka koobka Carabao Cup waxa ay ka dhacday Garoonka Manchester City iyada lugta labaad la dheeli doono 23 ka bishaan waxaana lagu Cayaari doonaa Garoonka Naadiga Mucjisada ah ee Bristol City oo horay koobkaan uga reebtay Manchester United.